China Sectional Belt Vulcanizing Press ZLJ Series Heavy-duty Uhlobo mveliso kunye nabenzi | UAntai
Ukusetyenziswa Ibhanti yengubo I-100 psi (7 kg / cm sq.)
Ibhanti yentsimbi I-200 psi (14 kg / cm sq.)
Ubukhulu. Ububanzi beBelt Ukusuka kwi-650mm ukuya kwi-3000mm
Inkqubo yoxinzelelo Ingxowa yoxinzelelo lwamanzi (iyakwazi nokusebenzisa uxinzelelo lomoya.). Cinezela i-100 PSI, i-200 PSI njl., Uxinzelelo lomphezulu wempahla eyolukiweyo kunye neentsimbi, ukuya kuthi ga kwi-1.8Mpa.
Vulcanizing Ubushushu Ubushushu beVulcanizing: 145 ℃ (uhlengahlengiso 0 ~ 200 ℃)
Inkqubo yokupholisa Impompo yoxinzelelo yokupholisa, ixesha lokupholisa kuphela i-5mins (ukupholisa ukusuka kwi-145 ukuya kwi-75 ℃).
Iidigri zokufudumeza iPlaten I-Bias angle 22 ℃ okanye 17 ℃, 20 20, uxande kunye nezinye izidanga zokhetho.
I-Voltage 220V, 380V, 400V, 415V, 440V, 480V, 660V, okanye ngokwesicelo somthengi.
1. 200 psi (14 kg / cm sq.) Iiyunithi zilungele ukusongela ibhanti yentsimbi yokuhambisa ibhanti.
2. Yamkela i-bolt yensimbi ephezulu kunye neendibano.
(Kwiimfuno eziphantsi zoxinzelelo, ikwanazo nezinto ezinobunzima be-aluminium yokukhanya)
Ukuphuculwa kwenkqubo yokuthintela kulula kwaye kulula ukuyisebenzisa, ukukhusela kwiingozi ezinokuthi zikhokelele kwimeko yokungaphumeleli kwe-bolt.
I-3.Lightweight aluminium platens zisebenzisa inkqubo entsha yokupholisa ngokukhawuleza ngaphakathi kwiiplaten.
4. ulwenziwo: ukufudumeza platen engile ulungelelwaniso kunye platen amalungiselelo ezininzi ziyafumaneka njengoko ngokwesicelo loMthengi.
Inkqubo entsha yokuxhuma yombane: iplagi yoyilo endala kunye nesokethi yiplagi ethe tyaba, izikhonkwane zeplagi kulula ukuba zaphulwe. Uyilo lwethu olutsha lweplagi lunobunzululwazi kwaye lusengqiqweni. Isebenza lula kakhulu, ikhuselekile kwaye ithembekile.
Inkqubo yengxowa ye-6:
Iyakwazi ukuqhubeka ngamanzi kunye nomoya, ukubumba ngaxeshanye, ngaphandle kwesakhelo sesinyithi, ubunzima bokukhanya kunye novavanyo lokuvavanywa ngaphandle kwefektri ukuya kuthi ga kwi-2.5MPa (iphetshana loyilo lwefashoni yakudala eyakhiwe ngesakhelo sesinyithi kunye neebhanti, ubunzima obunzima.)
Impompo yoxinzelelo oluzenzekelayo kunye noxinzelelo lwegeyiji, ivumela ukusetyenziswa ngokulula koxinzelelo ukuya kuthi ga kwi-200PSI yentsimbi ibhanti yentsimbi. Yonke le nkqubo iya kuba yimowudi yemoto epheleleyo. Emva kokusebenzisa inkqubo entsha yokupholisa ekufudumaleni, inokuphola ukusuka kwi-145 ukuya kwi-75 ℃ ngaphakathi kwemizuzu emi-5.
Impompo yokupholisa, xa isebenza ngesiguquli somoya, uxinzelelo lomoya, impompo yokupholisa ingasetyenziselwa ukupholisa. (Nceda uqaphele ukuba, ukuba unazo naziphi na iimfuno ezizodwa zempompo yokusebenza kwamandla ombane, nceda usazise ngaphambi komyalelo, umbane oqhelekileyo ungama-220V isigaba esinye)
Icandelo leVulcanizing Press ZLJ Series liCandelo sUnako ukudityaniswa kwezi nkalo: isinyithi, ishishini leekhemikhali, ukumbiwa kwesinyithi, isityalo samandla, amazibuko, amachweba. Umphezulu wokudityaniswa ugudile, kwaye unokunciphisa ukurhabaxa kwaye wenze ibhanti yokuhambisa ukuba isebenze ixesha elide.
Iiparameter ezicetyiswayo zokuSebenza:
Ukuphilisa uxinzelelo: 1.0-2.0 mpa;
Ukuphilisa ubushushu: 145 ° C;
Ukungqubana kobushushu beplate yomphezulu we-Vulcanization: +/- 2 ° C;
Ixesha lokufudumeza (ukusuka kubushushu begumbi ukuya kwi-145 ° C) ayikho ngaphezulu kwemizuzu engama-30;
I-Voltage ehambelana nayo: 380V, 50 Hz, AC, okanye ngokwesicelo somthengi;
Imveliso yamandla: 36 KW;
Uluhlu loHlengahlengiso lobushushu: 0 ~ 200 ° C;
Uhlengahlengiso lwexesha: 0 ~ 99 mins
Egqithileyo I-DB-G yohlobo lwentsimbi yokuhambisa iBelt yeBeeling Machine yokuCofa
I-Belt Vulcanzing Cinezela
Ukuhambisa kweBelt Vulcanzing Press